အတွင်းသား လေးတွေ ပေါ်လွင်ပီး ဆက်ဆီကျကျ လှပနေတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ….. – Shwe Naung
အတွင်းသား လေးတွေ ပေါ်လွင်ပီး ဆက်ဆီကျကျ လှပနေတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…..
N N | September 9, 2021 | Celebrity | No Comments
ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ အချစ်တော် မော်လ်ဒယ် သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချော ပတ်ထရစ်ရှာ ကတော့ သရုပ်ဆောင် ကောင်းသလို မိန်းကလေးတိုင်း အားကျရ လောက်အောင် အချိုးအစား ပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အလှတရား တွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားသူပါ..။
နိုင်ငံခြားသူ လေးတစ်ယောက်လို ချစ်စရာ ကောင်းလွန်းပြီး ယောကျ်ား လေးပရိသတ်တွေရဲ့ သည်းသည်း လှုပ်အား ပေးမှုတွေကို အများဆုံး ရရှိထားသူတဲ့ သူမကတော့ အခုတစ်ခါမှာလည်း ညို့အားပြင်းတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ဖမ်းစားလိုက်ပြန်ပါတယ်နော်..။
သူမရဲ့ပင်ကိုယ်အလှတရားတွေကို အထင်းသားပေါ်လွင်နေတဲ့ ဖက်ရှင်လေးတွေ နဲ့ ညို့ချက်တွေ ပြင်းပြင်း အလန်းစား ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံရိပ် လေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားလိုက်တာ ဖြစ်ပါ တယ်နော်..။
ဆွဲဆောင် မှုတွေရှိပြီး မိမိုက် လွန်းနေတဲ့ ပုံရိပ်လေ းတွေကတော့ မိန်းကလေး အချင်းချင်းတောင် ကြွေရ လောက်အောင် ညို့အားပြင်းနေတာမို့ ပရိသတ်တွေ လည်း အချစ်ပို နေကြဦးမှာပါနော်.. ။
June တုန်းက ကိုယ့်အခန်း လေးထဲမှာပဲ ကိုယ့်ဘာသာ အမှိုင်းလေး ရိုက်ဖြစ်တဲ့ပုံလေးတွေ..” ဆိုပြီး သူမရဲ့အမိုက်စား ပုံရိပ် လေးတွေကို ပတ်ထရစ်ရှာက ပြန်လည် မျှဝေ ပေးတာပါ..။
ညို့အားပြင်းတဲ့ အလှတရား တွတွေ ထင်ရှားပေါ်လွင်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုတွေ ရှိလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ ပုံရိပ်လေးတွေကိုတော့ ပရိသတ်တွေ သဘောကျ နေကြမှာပါနော်..။
အရင်ကသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း မေပန်းချီရဲ့နောက်ကွယ်မှ ာမဟုတ်မမှန်တာတွေပြောရင်းနဲ့ နာမည်ဖျက်ခြင်းခံရ……….
အလှပုံ တိုင်းလိုလို ချစ်စရာ ကောင်းနေတာကြောင့် ဝင်းရွှေရည်သင်း ကို နာမည်ကြီး စေခဲ့သော ချစ်စရာ ကောင်းသော ပုံရိပ်များ…..
ညို့အား ပြင်း တဲ့ အလှ တရား တွေ နဲ့ အိချောပို….
အချိုးအစား ပြေပြစ်ပြီး ဆက်ဆီကျကျ လှပနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် လုလုအောင်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…..